Exodus 28 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Hwɛ 2021 de a yɛasesa mu ayɛ no foforo no
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm
28 “Afei frɛ wo nua Aaron ne ne mma fi Israelfo mu bra na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ m’anim;+ Aaron+ ne ne mma Nadab, Abihu,+ Eleasar, ne Itamar.+ 2 Pam ntade kronkron ma wo nua Aaron na ɛnhyɛ no anuonyam na ne ho nyɛ fɛ.+ 3 Wo ne anyansafo a mede nyansa honhom+ ahyɛ wɔn koma mã nyinaa nkasa. Ma wɔmpam ntade mma Aaron na ne ho ntew na watumi asom sɛ ɔsɔfo wɔ m’anim.+ 4 “Ntade yi na wɔmpam: nkatabo,+ nguguso,+ nsasin,+ atade tenten a wɔanwene no adamadam, abotiten+ ne abomu.+ Ma wɔnyɛ ntade kronkron mma wo nua Aaron ne ne mma na wɔasom sɛ asɔfo wɔ m’anim. 5 Ma wɔmfa sika kɔkɔɔ, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera nyɛ. 6 “Wɔmfa sika, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera nnwene nguguso+ no. 7 Wɔmfa ade ntoto ne mmati abien no so na wɔnka nsi anim.+ 8 Ɛsɛ sɛ wɔde sika, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera a wɔanwene no ara bi yɛ abɔso+ a wɔde bɛkyekyere. 9 “Afei fa soham+ abo abien na kurukyerɛw+ Israel mma no din+ wɔ so. 10 Kyerɛw din asia wɔ ɔbo biako so, na kyerɛw asia a aka no nso din wɔ ɔbo biako so, fi ɔpanyin so kosi akumaa so.+ 11 Kurukyerɛw Israel mma din no wɔ abo abien no so+ sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so. Fa sika kɔkɔɔ fofa ano.+ 12 Fa abo abien no sisi atade no mmati so na ɛnyɛ nkae abo mma Israel mma.+ Na Aaron mfa wɔn din a ɛwɔ ne mmati abien so no mmra Yehowa anim sɛ nkaede. 13 Fa sika fofa ano, 14 na fa sika amapa+ yɛ ntweaban abien. Nwene no sɛ ahama na fa ntweaban no suso mfofaano no mu.+ 15 “Afei nwene atemmu nkatabo+ te sɛ nguguso no. Fa sika kɔkɔɔ, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera yɛ.+ 16 Sɛ wɔka to so a, ɛnyɛ ahinanan; ne ntwemu nyɛ nsateakwaa akron,* na ne tɛtrɛtɛ nso nyɛ nsateakwaa akron.+ 17 Na fa abohene tetare mu. Yɛ no nsãso anan.+ Nsãso a edi kan ne aboɔdenbo kɔkɔɔ+ ne akraatebo+ ne ahabammonobo.+ 18 Nsãso a ɛto so abien ne nsrammabo+ ne hoabo+ ne ahwehwɛbo.+ 19 Nsãso a ɛto so abiɛsa ne lesembo ne mfrafraebo+ ne beredumbo.+ 20 Nsãso a ɛto so anan ne sikaberebo+ ne sohambo+ ne yasepebo. Fa sika kɔkɔɔ toto anoano.+ 21 Kurukyerɛw Israel mma dumien no din+ wɔ abo no so. Kyerɛw no sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so, na ebiara nnyina hɔ mma Israel mmusua dumien+ no mu biako. 22 “Fa sika amapa nwene ntweaban wɔ nkatabo no so sɛ ahama.+ 23 Na fa sika yɛ nkawa abien wɔ nkatabo no so,+ na fa nkawa abien no hyehyɛ nkatabo no ntwea abien no so. 24 Afei fa nhama abien a wode sika ayɛ no hyehyɛ nkawa abien no mu wɔ nkatabo no ntwea so.+ 25 Na fa nhama abien ano a aka no hyehyɛ ade a wɔde atoto nguguso no mmati abien no so no mu wɔ atade no anim.+ 26 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien fa hyehyɛ nkatabo no ntwea ase ma ɛnkyerɛ asɔfotade a ɛhyɛ ase+ no. 27 Afei fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien fa hyehyɛ ade abien a ɛda nguguso no mmati so no ase wɔ atade no anim wɔ ɛrekɔ ne ntoae so, abɔso no so.+ 28 Wɔmfa ahama bruu nhyehyɛ nkawa no mu nkyekyere nkatabo no mmɔ nguguso no mu wɔ abɔso no so, na nkatabo no amfi nguguso no so.+ 29 “Na Aaron mfa Israel mma din a ɛwɔ atemmu nkatabo so no mmɔ ne koko so mmra Kronkronbea hɔ sɛ nkaede wɔ Yehowa anim daa. 30 Afei fa Urim+ ne Tumim* hyɛ atemmu nkatabo no mu, na sɛ Aaron ba Yehowa anim a, ɔmmɔ wɔ ne koko so. Enti Aaron mma Israelfo no atemmu+ nna ne koma so daa wɔ Yehowa anim. 31 “Fa ahama bruu nkutoo yɛ asɔfotade nsasin no.+ 32 Twa atade no kɔn wɔ ne mfinimfini na nwene ano hyia. Yɛ no sɛ akotade kɔn na antew amfa mu.+ 33 Fa ahama bruu ne tankɔkɔɔ ne koogyan nwene granate akutu* sensɛn ano hyia. Afei yɛ sika adɔmma+ hyehyɛ granate akutu no ntam hyia. 34 Enti granate akutu biara akyi no, sika adɔmma di hɔ; ɛnsesa so wɔ asɔfotade nsasin no ano nhyia.+ 35 Aaron nhyɛ atade yi mfa nsom. Sɛ ɔkɔ kronkronbea hɔ kogyina Yehowa anim a, wɔbɛte nnyigyei wɔ ne ho, na opue nso a, wɔbɛte. Ɔnyɛ saa na wanwu.+ 36 “Afei fa sika amapa yɛ ade tratraa hyɛnn bi na kurukyerɛw so, sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so, sɛ ‘Kronkron ne Yehowa.’+ 37 Fa ahama bruu so mu na ɛmfam abotiten+ no so wɔ abotiten no anim. 38 Ɛmmɔ Aaron moma so, na sɛ mmusu ba ayɛyɛde kronkron a ɛsɛ sɛ Israelfo no tew ho no so a, Aaron asoa ɛho asodi ama wɔn.+ Ɛmmɔ ne moma so daa na ama Yehowa ani asɔ wɔn.+ 39 “Afei fa nwera nwene atade tenten; yɛ no adamadam, na fa nwera yɛ abotiten+ na nwene abomu nso.+ 40 “Yɛ atade+ ne abomu ne abotiri+ ma Aaron mma no nso na ɛnhyɛ wɔn anuonyam na wɔn ho nyɛ fɛ.+ 41 Fa asɔfotade no hyehyɛ wo nua Aaron ne ne mma na fa ngo sra wɔn+ na ma wɔn tumi.*+ Afei tew wɔn ho na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ m’anim. 42 Fa nwera pam twakoto ma wɔmfa nkata wɔn ho+ mfi wɔn sisi nkosi wɔn srɛ. 43 Bere biara a Aaron ne ne mma bɛba ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛba afɔremuka ho abɛsom wɔ kronkronbea hɔ no, ɛsɛ sɛ wɔhyɛ na wɔanyɛ abusude na wɔanwuwu. Eyi yɛ ahyɛde a ɔne ne nkyirimma bedi so daa.+
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne “nsayam,” fi kokurobeti so kosi kokɔbɛto so.
^ Ná Urim ne Tumim yɛ biribi a wɔde kyerɛ ɔsoro nsɛm. Ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ abo a wɔde bɔ ntonto.
^ Anaa “pomegranate.”
^ Nea Hebri asɛm yi kyerɛ ankasa ne sɛ “fa tumi hyɛ wɔn nsa.”
KYERƐW KRONKRON—WIASE FOFORO NKYERƐASE (2008 DE)
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase (2008 De)
Share Share Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase (2008 De)